साम्राज्ञीले मिडियासँग चित दुखाउँदै भनिन्, ‘अब म थाकिसकेँ अन्तरबार्ता दिन्न’ – भिडियो सहित – सडक मिडिया
साम्राज्ञीले मिडियासँग चित दुखाउँदै भनिन्, ‘अब म थाकिसकेँ अन्तरबार्ता दिन्न’ – भिडियो सहित
लोकप्रिय नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले युटुवर र अनलाइन मिडियासँग निकै चित दुखाएकी छिन् । फेसबुक लाइभ मार्फत उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । युटुवरले राम्रो कुरालाई पनि विगारेर प्रस्तुत गरेको साथै हेडलाइन आकर्षक बनाउनमा आफूहरुलाई प्रयोग गरेको उनको गुनासो छ । साथै उनले अब युटुवमा अन्तवार्ता नदिने घोषणा गरेकी छन् ।
कलाकार साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफूमाथि दु’र्व्यवहार भएको बताएकी छन्। शाहले इन्स्टाग्राममा केही दिनअघि भिडियो पोस्ट गर्दै आफूमाथि ठूला ब्यानरका चलचित्र निर्माताहरूले दु’र्व्यवहार गरेको आ’रोप लगाएकी हुन्।
त्यतिबेला आफू सानै भएकाले दु’र्व्यवहारबारे सार्वजनिक गर्न नसकेको कलाकार शाहले बताइन्। त्यति नै बेला पुलिस के’स गरेको भए लाग्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएकाले कानुनी उपचारमा नगएको उनको स्पोष्टिक्ति छ।
उनको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा रोई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने। सामाजिक सन्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि !’
केसीको प्रतिक्रियापछि उता शाहले अर्को भिडियो सार्वजनिक गर्दैै जापानमा आयोजित वर्ल्ड फन्क्सन कार्यक्रममा पनि आफू दु’र्व्यवहार भएको दाबी गरेकी छन्।
शाहले केही दिनअघि आफूमाथि दु’र्व्यवहार भएको भिडियो सार्वजनिक गरेलगत्तै आफूभन्दा ठूलाबाट यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा नबोल्न अनुरोध गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले नै काम दिनुभएको हो। उहाँहरूकै मुभी हिट भएको हो। उहाँले मलाई जति नै नराम्रो गरे पनि मिडियामा आउन दिएकी थिइनँ।’
Previous Post: भारतमा भयानक बन्दै कोरोना: झण्डै ६ लाख पुगे संक्रमित, एकदि यति धेरैकाे मृत्यु
Next Post: बलिउड अभिनेता सुशान्तको ‘भिसेरा रिपोर्ट’ आयो अस्पतालले दियाे यस्ताे जानकारी
अर्का अभिनेताले पनि रोजे सुशान्तको बाटो…हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! 5,104 views
नेपालमा न्युज च्यानल बन्द भएपछि भारतीय मिडियामा खैलाबैला, कसले के लेखे? पढ्नुहोस 2,760 views